Allende, Barceló kunye noSáenz de Urturi. Amabhaso ama-Liber 2020, aBantwana kuZwelonke kuNcwadi noLutsha kunye nePlanethi | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ukhuphiswano kunye neeMbasa, Ababhali, Iincwadi, Ezahlukeneyo
Kule nyanga yababhali sineendaba ezimnandi kakhulu. Kukho abathathu abaphumeleleyo kumabhaso okugqibela kwaye abalulekileyo anikiweyo. Isabel Allende uthathe i Inkululeko 2020 Umsebenzi wakhe wokubhala, UEria Barceló el Umvuzo weSizwe waBantwana noNcwadi lwaBantu aLutsha nge Iziphumo zeFrankenstein y UEva García Sáenz de Urturi Ndiphumelele nje Imbasa yePlanethi nge I-Aquitaine.
1 Isabel Allende-Liber 2020
2 U-Elia Barceló-Ibhaso leLizwe leNcwadi yaBantwana naBantu aBancinci
3 U-Eva García Sáenz de Urturi-Imbasa yePlaneta
Isabel Allende-Liber 2020
La I-Federation of Publishers Guilds yaseSpain (I-FGEE) inike eli bhaso umbhali waseChile njengowona mbhali ubalaseleyo waseLatin America ngomsebenzi wakhe wokubhala.
Ngaphandle kwamathandabuzo, u-Isabel Allende ungomnye wababhali abafundwayo kwihlabathi liphela nangaphezulu Iincwadi ezizizigidi ezingama-74 zithengisiwe, ngemisebenzi engama-24 iguqulelwe ngaphezulu kwe Iilwimi ezingama-42 kwaye iyagxininiswa rhoqo ngabagxeki kunye nabafundi. Inkqubo ye- ukuqonda Umhlaba weza kuye ngo-1982 ngencwadi yakhe yokuqala, Indlu yeMimoya. Ukusuka apho, imisebenzi efana ne Zothando nezithunzi, UEva Luna, Ntombi yethamsanqa, Paula, Umthandi waseJapan, Ngaphaya kobusika kwaye kutshanje Ixesha elide lolwandle.
Umsitho wokuwongwa uya kuqhubeka 27 ngo-Oktobha kubuGcisa iSanta Mónica, eBarcelona, ​​igcwele Efanelekileyo Mahala ngo-2020.
U-Elia Barceló-Ibhaso leLizwe leNcwadi yaBantwana naBantu aBancinci
UEria Barceló Uvela eAlicante kwaye wafunda iSpanish kunye neAnglo-Germanic Philology. Uhlala Innsbruck (Ostriya), apho afundisa khona uncwadi lwaseSpain kunye neeklasi zokwenziwa eyunivesithi. Udibanisa umsebenzi kunye nomsebenzi wobhalo kwaye ungumbhali weenoveli zabantu abadala kunye nabantu abancinci abaye baguqulelwa kwiilwimi ezingaphezu kwe-10 ezahlukeneyo. Izihloko zabo Ityala lomculi okhohlakeleyo y Cordeluna bathathe i Ibhaso likaEdebé loNcwadi loLutsha. Kwakuloo mhleli mnye wapapasha Ityala loLwaphulo-mthetho lwe-Opera y Iinqununu zaseMalta.
Ngoku iphumelele PImbasa yeSizwe yaBantwana noNcwadi loLutsha i-2020, ngesixa-mali sama-20.000 euros, yi Iziphumo zeFrankenstein. Kule noveli, u-Barceló uhlawula umsebenzi kaMariya uShelley, kwaye wawongwa ngaphambili nge I-XXVII Edebé Ibhaso loNcwadi kwimeko yolutsha yonyaka 2019.
Iinkwenkwezi UNora, enye Umfundi wezonyango wenkulungwane yama-XNUMX, Kuya kufuneka aphile kolo luntu kwaye ajongane nokungqubana kwenkcubeko kunye neendlela zokuziphatha ahlangana nazo. Iziphumo zeFrankenstein Yibhulorho yencoko phakathi kwamaxesha amabini kwaye isenza ukuba sibonakalise ukungalingani ngokwesini ngokufanelekileyo nangokwasentlalweni. Ngokunjalo, njengakwimisebenzi kaShelley, ikwachaphazela uxanduva lokufezekisa uxanduva kunye nokwamkela iziphumo zezenzo zethu.
U-Eva García Sáenz de Urturi-Imbasa yePlaneta
Emva konyaka ophelileyo, eli bhaso leplanethi yabasetyhini kulo nyaka liza kuya kumbhali waseBasque ngenoveli yakhe I-Aquitaine. la wokugqibela kwakunjalo USandra Barneda, ngenxa Ulwandle ukuze ufike apha.
UEva García Sáenz de Urturi Wayeqeqeshelwe ukuba ngugqirha wamehlo, kodwa waba ngumbhali othengisa kakhulu eSpain ubusuku bonke. Waqala ukuzipapasha eyakhe inoveli yokuqala eAmazon, Isaga sabadala (2012), ethe kwiiveki nje ezimbini yatshayela ukuthengisa kwaye yaba yinto. Emva kwexesha, iinoveli ezimbini (ezimalunga nama-500 amaphepha) kwaye ngo-2016 wapapasha uthotho lwakhe oludumileyo, esele ikwindlu yokushicilela iPlaneta: la Trilogy yeSixeko esimhlophe, yenziwe nge Ukuthula kweSixeko esimhlophe, iiRites zaManzi kunye neeNkosi zeXesha. Uthotho oluthengise ngaphezulu kweekopi ezizigidi kwaye lube nolungelelwaniso lwakamva nje lwefilimu olwalukhokelwa ngu UDaniel Calparsoro.
USáenz de Urturi uyicacisile loo nto I-Aquitaine Yiyo Thriller eliphakathi, irhafu ku Igama le rose, ngu-Umberto Eco, njengeparadigm yenoveli yolwaphulo-mthetho enembali yembali.
USandra Barneda, owokugqibela, wathi thaca inoveli yenkundla esondelelene ngakumbi. Okona kwaziwa njengentatheli kunye nomsasazi kamabonwakude, uBarneda ubhale iincwadi ezintlanu (ezintandathu ngale) ukusukela oko wapapasha inqaku lakhe lokuqala. Hleka emoyeni kwi2013.
Igala ibibanjwe phezolo e IPalau de la Música de Barcelona, inemeko yempilo yangoku kwaye ithintelwe kumsitho osondeleyo kunye neendwendwe ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Allende, Barceló kunye noSáenz de Urturi. Amabhaso ama-Liber 2020, aBantwana kuZwelonke kuNcwadi lwaBantwana noLutsha kunye nePlanethi